SomaliTalk.com » Cabdiboqor
Home » Qoraallada Halkudhegga "Cabdiboqor"
HORDHAC Allaah ayaa mahad oo idil iska leh. nabadgalyo iyo naxariisina nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Intaa kabacdi, aqristaha sharafta badanoow, anigoon gogol-dhig dheer waxba kugu daalin, bal aan si toos ah u galo dulucda qormada. Read More →
Hordhac/Gogoldhig Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo Intaa kabacdi, aqristaha sharafta badanoow, ma aha wax lagu farxo wadan 20-sano iyo ka badan burbur iyo dagaalo ka dhex aloosnaayeen, magacyo kala duwanba haloo yeelee, guntooduna wada aheyd dano shisheeye oo dad maqaarka sare Soomaali ka ahi u fulinayeen, in hadana dagaal Shidaal...
“Nin Aduunyo joogoow maxaa aragti kuu laaban. Aakhino nin aadoow maxaa lagu ogeysiiyey” Hordhac/Gogoldhig Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabad galyo iyo naxariisina nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaaha yeelo. Qormadan tixanaha ah qeybteedan 5-aad waxaan uga hadleeynaa Jaamacad ka eryida ardeyda , tahriibinta, Dhacdadii ugu dambeysey ee Doontii tahriibka, xabsigii iyo qisooyinkii lagala kulmey....
Hordhac/Gogoldhig Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo. Waxaan warbixino tixane ahaa oo in mudo ah socdey horey uga qorey wadanka Pakistan-Oo Bachelor-keeygii iyo Masters-kiiba aan kusoo dhameystey iyo dhowr sano oo shaqo ah, mudo 8-sano ku dhawaad ahna aan ku noolaa-Waxbarashadiisa iyo sida Soomaalida uga faa’ideysan karto....